Uyibeka njani iVidiyo ye-Youtube kwimo yakho yeWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyibeka njani ividiyo ye-Youtube kwisimo sakho se-WhatsApp?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 313
Izikhundla zeWhatsApp yenye yezona zinto zinomtsalane esinokuyifumana kule sicelo sokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza. Ngabo, abasebenzisi banokwabelana ngalo naluphi na uhlobo lwemiyalezo, iifoto kunye neevidiyo. Namhlanje siza kukufundisa indlela yokufaka ividiyo ye-YouTube kwisimo sakho kuWhatsApp
Kukho iqhinga onokuthi ungazi ngalo kwaye livumela abasebenzisi ukuba babenakho ukukhetha beka nayiphi na ividiyo ye-Youtube ngokuthe ngqo kwizimo zakho ze-WhatsApp. Ukuba ungathanda ukufumanisa oku kunye nezinye iimfihlo, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo.
Enye yezinto zokuqala ekufuneka sizenzile ukuba sabelane ngevidiyo ye-YouTube ngokwimo yethu kuWhatsApp yile khuphela ifayile esifuna ukuyipapasha.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba isicelo I-WhatsApp ivumela kuphela ukulayisha iividiyo kwiindawo ezinesithuba esilinganiselweyo. Oku kuthetha ukuba ngekhe ukwazi ukwabelana ngeevidiyo ezinde ngaphezu kwemizuzwana engama-30. Iya kuba nzima ukubonakala iphelele.
Khetha ividiyo ofuna ukwabelana ngayo kwisimo sakho se-WhatsApp
Ngoku kufuneka khuphela ividiyo. Ngale nto unokusebenzisa naliphi na kula maphepha ewebhu akuvumela ukuba ukhuphele iifayile kwi-YouTube.
Kukho amaphepha amaninzi apho unokukhuphela khona nayiphi na ividiyo eposwe kwi-YouTube. Khetha eyona uyithandayo, khuphela ikhonkco levidiyo ofuna ukuyikhuphela kwaye uyincamathisele kwiphepha lokukhuphela. Emva koko nqakraza kwiqhosha "Landa" uze uligcine kwisixhobo sakho.
Ngaba sele unayo ividiyo ekhutshelweyo? Ngoku okulandelayo kuya kubakho thumela ngqo kwifowuni yethu ephathekayo. Zininzi iindlela zokwenza, ungayithumela nge-imeyile, qhagamshela iselfowuni yakho kwikhompyuter yakho kwaye ukope ifayile kwifowuni yakho okanye ungene kwiWebhu yeWhatsApp kwaye utsale ifayile.
Vula WhatsApp Web kwikhompyuter yakho
Yenza iqela apho ulilungu kuphela
Kwingxoxo cofa kwi icon "Ukuncamathisela"
Iindawo ifolda apho ukhuphele ividiyo
Khetha kwaye ucofe ku "thumela"
Ngoku unako khuphela ividiyo kwaye ugcine kwi mobile yakho
Ngenisa ividiyo kwilizwe lethu
Sifika kwinqanaba elinomdla kuthi kwaye kunjalo funda indlela yokuyibeka ividiyo esiyikhuphelileyo kwi-YouTube kwimeko yethu ye-WhatsApp. Inyaniso kukuba kuya kuba lula kakhulu ukuyenza. Apha sikushiya inyathelo ngenyathelo:
Vula isicelo seWhatsApp kwisixhobo sakho esiphathwayo
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Amazwe”Oko kubonakala ngaphezulu kwekhusi.
Uluhlu luza kuvela kunye nazo zonke iindawo ezipapashiweyo ngabafowunelwa bakho. Kule meko kufuneka ucinezele uphawu lwekhamera ebonakala emazantsi esikrini.
Kufuneka khetha ividiyo ufuna ukufaka kwindawo yakho kwaye ucofe kwiqhosha eliluhlaza elivela kwikona esezantsi ekunene kwesikrini.
Ilungile. Ividiyo yakho ipapashwe kurhulumente. Khumbula ukuba ukuba ingaphezulu kwemizuzwana engama-30 kufuneka uyisika.
1 Khuphela ividiyo
2 Yithumele kwiselfowuni
3 Ngenisa ividiyo kwilizwe lethu
Ndingaqala njani kakuhle kwiPinterest?
Ndifuna ukwazi indlela yokumakisha abahlobo bam kwi-Instagram